ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် မိမိနေထိုင်ရာ နိုင်ငံအပေါ် သစ္စာစောင့်သိဖို့ ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောကြား
We will always trust you.I should say that "While 88 generation is helping innocent myanmar people,the governor haveanice time.They are thinking for themselves how to get benefit.They are working neither for country nor people.They have never solved the problems.They have ever made problem.88 generation is not their servant.The governor is the one who must take the responsibility for people.They are rubbish for the country.
mixed blood :
what about discrimination between ethnic of burma and mixed blood ,non ethnic citizens?
သစ္စာရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြီး မင်းကိုနိုင်ကြည့်ရတာ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ဘာသာခြားတွေကို စောင်းပြောတဲ့ပုံပဲ....တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးအဆက်ဆက် ဖျက်စီးသွားတာဟာ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ဘာသာခြားတွေမဟုတ်ပဲ ဗမာလူများစုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ မမေ့ဖို့လိုတယ်
ေအာင္တင္ နေရပ်- ကေနဒါ :
ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ မိမိနေထိုင်ရာ နိုင်ငံအပေါ် သစ္စာစောင့်သိဖို့လိုပါတယ်။ သစ္စာဖေါက်ဖျက်သူ၊ သစ္စာကို မစောင့်သိသူဆိုသူတွေဟာ သစ္စာခံထားတဲ့ နိုင်ငံသားတွေမှသာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တာပါ။ နိုင်ငံခြားသားဆိုတာက သစ္စာခံထားသူ မဟုတ်လို့ သစ္စာဖေါက်လို့ ခေါ်ရန် မူလကပင် အကြောင်းမပေါ်ပါ။